Nhau - Kushanya Kwevatengi
Nhasi, timu yedu yakagamuchira neushamwari Jan, CEO wekambani yeBelgian yenyika dzakawanda uye nechikwata chake kusanganisira mainjiniya ekugadzira zvigadzirwa, mamaneja ekutenga uye mainjiniya eprojekti kufekitori yedu. Nezvinodiwa zvehunyanzvi uye zvakaomarara, vakaongorora yedu CNC musangano, EDM mashopu, Inononoka waya yekucheka shopu, Kugaya shopu, Imba yemhando uye Musangano weMusangano. Uku kushanya takawana kurumbidzwa kukuru uye kuziva kwakanyanya kubva kwavari. Uye zvakare Jan nechikwata chake vakapa mazano akakosha kuchitoro chedu chekushandisa.
Pamusangano, Jan uye mainjiniya edu ekugadzira vakakurukura nezve zvigadzirwa zvavo. Bhizinesi ravo hombe zvikamu zvepurasitiki pamidziyo yemumba uye indasitiri yezvokurapa, uye vane chishuwo chakakura chekuumba, kuisa kuumba uye 2K kuumba, ndizvo chaizvo zvatinoita. Isu takaratidza edu akafanana epurasitiki chikamu masampuli uye takakurukura navo pamatambudziko ehunyanzvi mukugadziriswa kwemhando idzi dzeforoma, pamwe neruzivo rwekuteererwa. Ivo vakafadzwa uye kuzivikanwa neinjiniya yedu 's ruzivo rwehunyanzvi uye ruzivo rwakapfuma, zvakadaro taive nekunzwisisa kuri nani kwezvinodiwa nevatengi uye zvinodiwa zvepurasitiki muforoma kugadzira uye chikamu kugadzira.
Pasina mubvunzo ruzivo rwedu rukuru muMedical devices uye Imba zvishandiso zvekugadzira uye kugadzirwa kwepurasitiki kwakawedzera kuvimba kwedu mukuenderera pamwe. Chekupedzisira, vakatibvunza kana isu tiine shopu isina guruva uye vanoda kuti zvigadzirwa zvavo zvigadziriswe mufekitori yedu. Isu takatoronga kuti tigadzirirwe musangano usina guruva muna 2021.
YF chakuvhuvhu mutungamiri mukugadzira chaiyo jekiseni kuumbwa, ane makore anopfuura gumi achipa epurasitiki jekiseni kuumbwa uye jekiseni kuumbwa sevhisi kumhiri kwemakungwa musika, isu tinopa yakavimbika & yekusika yekushandisa mhinduro, hunyanzvi hwedu hunosanganisira Multi Cavity Mould, Precision Mould, 2 Shot Mould, Insert richigadzirisa uye ruzivo mukugadzira mapurasitiki muforoma kuti Automotive, Medical, Home mudziyo uye Industrial indasitiri.
Taura nesu kuti tidzidze zvakawanda nezve edu ekuchengetedza mari zvino.
Mould Vagadziri, Plastic Kuisa richigadzirisa, Prototype Mould Vagadziri, Tsika Mould, Jekiseni Kuumbwa Nesimbi Inoisa, Mould Factory,